पत्रकारको त्यस्तो के प्रश्न थियो जसको उत्तर प्रधानमन्त्रीले चुनावपछि दिन्छु भने, पढ्नुस् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तर्वार्ता::local sandesh
पत्रकारको त्यस्तो के प्रश्न थियो जसको उत्तर प्रधानमन्त्रीले चुनावपछि दिन्छु भने, पढ्नुस् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तर्वार्ता
लोकल संदेश / बुध, बैशाख २०, २०७४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश निर्वाचनमा होमिइसकेकाले अब चुनाव हुँदैन कि भनेर प्रश्न नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चा चुनावमा नआए त्यो उनीहरुका लागि ऐतिहासिक गल्ती हुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- ‘म आम नेपाली जनता, सबै राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता र आम नागरिक समाजलाई ढुक्क भएर कुनै संकोच नराखी निर्वाचनमा सहभागी हुन अपील गर्न चाहन्छु ।’
मधेसी मोर्चा चुनावमा आएन भने त्यो उनीहरुको ऐतिहासिक भूल हुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । यद्यपि मोर्चालाई समेत चुनावमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको र उनीहरुले चुनावमा आउन चाहिरहेको प्रधानमन्त्रीले जनाउ दिए ।
मधेसी मोर्चाका साथै बाबुराम र विप्लव लगायतले चुनावको विरोध गरिरहे पनि जनताको पल्ला भारी भइसकेकाले चुनाव नरोकिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘जनता नै निर्णायक हो, राज्यका सबै संयन्त्र तम्तयार भएर अघि बढेपछि र जनता तयार भएपछि चुनाव केहीले पनि रोकिँदैन ।’
चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? जनतालाई भनिदिनुपर्‍यो प्रधानमन्त्रीज्यू, बैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ कि सर्छ ? असाध्यै दुविधा भयो…
निर्वाचनको तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब २०/२२ दिन मात्र बाँकी छ । म अनलाइनखबरमार्फत आम नेपाली जनता, सबै राजनीतिक दल र तीन कार्यकर्ता र आम नागरिक समाजलाई ढुक्क भएर कुनै संकोच नराखी निर्वाचनमा सहभागी हुन अपील गर्न चाहन्छु । कुनै पनि मूल्यमा वा सर्तमा अब निर्वाचन सर्दैन, बैशाख ३१ गते नै हुन्छ । अब यो प्रश्नमाथि छलफल गरिराख्न आवश्यक छैन ।
चुनाव तोकिएकै मितिमा पक्कै हुन्छ त ?
मैले त धेरै पहिलेदेखि प्रष्ट भन्दै आएको छु, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि बडो प्रष्टसँग भनिरहेको छ, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ ।
हिजो मात्रै मैले नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरुलाई सुरक्षा स्थिति के छ ? निर्वाचन सम्पन्न गर्न अफ्ठ्यारो महसुस गर्नु भएको छ ? भनेर बिफि्रङ लिएको थिएँ । उहाँहरुले बडो दृढताका साथ हामी चुनाव सम्पन्न गर्न सक्छौं, एकै चरणमा गर्न सक्छौं भनेर तथ्य/तथ्यांकसहित भन्नुभएको छ ।
यो सबैले अब देश निर्वाचनमा गइसक्यो, सरकार यो निर्वाचन हरहालतमा सम्पन्न गर्न दृढ छ । त्यसैले ढुक्क भएर यो प्रक्रियामा सहभागी हुन म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई अपील गर्न चाहन्छु ।
चुनावको माहौल बनिरहेको थियो । तर, गृहमन्त्रीको टि्वटले वीचैमा आशंका बढायो । यसलाई के भन्ने ?
गृहमन्त्रीजीले कुन अर्थमा भन्नु भो, मैले भेटेर कुरा गर्न अझै पाएको छैन । तर, उहाँको स्पष्टीकरण आएको छ, मैले सबै राजनीतिक दललाई सहभागी गराउँदा राम्रो हुन्छ मात्र भनेको हो, निर्वाचनलाई यताउता भनेको होइन भन्नुभएको छ ।
तैपनि उहाँको भनाइ आएपछि थोरै बहस जस्तो देखियो । तर, त्यो कारण देखाएर ‘के हुन्छ ?’ भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, जसले निर्वाचन घोषणा गरेको हो, मैले ढुक्क हुन भनिरहेको छु, निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ । सुरक्षा एजेन्सीहरु तयार छौं भनिरहेका छन्, प्रमुख दलहरु निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसके । यो स्थितिमा गृहमन्त्रीको एउटा टि्वटले पैदा गरेको सानो कन्फ्यूजनलाई ठूलो बनाउन आवश्यक छैन ।
तर, चुनावका लागि अझै पनि राजनीतिक सहमति भएको छैन, मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएको छैन । यो स्थितिमा चुनावमा जाँदा राम्रो हुँदैन कतिपय मानिसहरुले भनिरहेका छन् । तपाई त आफैं मधेस, जानजाति लगायत पिछडिएको क्षेत्रको आवाज उठाउने मान्छे, कसरी मधेसी मोर्चालाई छाडेर चुनाव जान सक्नुहुन्छ ?
तपाईले भनेको जस्तै, यो सरकार गठनको औचित्य सिद्ध गर्नका लागि मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई मिलाउने र मधेसवादी दलदेखि जनजाति सबैलाई मिलाएर चुनावमा लैजान आठ महिना लगातार प्रयास गरेको सबैले देख्नुभएकै छ ।
खासगरी मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउन धेरै प्रयास गरेँ । अहिले पनि गरिरहेको छु । सहमतिको प्रयास सबै सकियो भन्ने होइन । मेरो अहिले पनि मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ र म अझै आशावादी छु, उहाँहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन आउनुहुन्छ ।
मोर्चा चुनावमा कसरी आउला ? चुनाव बिथोल्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरिसकेको अवस्था छ…
मोर्चाका नेताहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि प्रचण्ड नै मधेसको मुद्दा, आदिवासी जनजातिको मुद्दा, दलित, महिला मुस्लिम सबै उत्पीडितको मुद्दा उठाउने र त्यसका निम्ति ठूलो संघर्ष र बलिदानको नेतृत्व गरेको व्यक्ति हो ।
अहिले पनि उहाँहरु (मोर्चा) ले उठाउने गरेको विषय अनुसार नै संविधानसभामा माओवादी केन्द्र भनौं वा मैले नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ भन्ने पनि उहाँहरुलाई थाहा छ । हामी १० प्रदेश होस् भन्ने चाहना राख्ने पार्टी हो भन्ने पनि थाहा छ ।
मैले संविधान संशोधन विधेयक पहिलो वा दोस्रो राख्दा पनि उहाँहरुसँग जति छलफल भएको छ, उहाँहरुले यो कुरा बुझ्नुभएको छ ।
त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने मधेसी जनताले राम्रोसँग बुझिसक्नुभएको छ कि मधेसको पहिचान स्थापित गर्न र हिमाल, पहाड र मधेसलाई जोडेर चुनावतिर लैजान प्रचण्डले बल गरिरहेको छ । यो अवस्थामा म के देख्छु भने मोर्चाले मेरो नेतृत्वको सरकारजति सकारात्मक र मधेसप्रति वैचारिक र भावनात्मक सम्वन्ध भएको र उहाँहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्ने अर्को प्रधानमन्त्री तत्काल नै पाइहाल्नुहुन्छ भन्ने लागेको छैन ।
यो स्थितिमा उहाँहरुले आन्दोलन गर्ने, बहिस्कार गर्ने जस्ता जति पनि कुरा गर्नुभएको छ, पक्कै पनि केही दिनभित्र उहाँहरुले रियलाइज गर्नुहुन्छ कि चुनाव बहिस्कार गरेर गल्ती हुन्छ । उहाँहरु र, सम्वाद र सहमतिमा आउनुहुन्छ र चुनाव सम्पन्न हुन दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
यदि मोर्चा चुनावमा आएन भने नि ?
आउँदै आउनुभएन भने उहाँहरुले ठूलो गल्ती गर्नुहुनेछ । किनकि यस्तो सरकार, जो मधेसप्रति यतिधेरै सकारात्मक छ र मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न यति लागिपरेको छ ।
मधेसमा पहिचान अधिकारको मुद्दा स्थापित गर्न माओवादी नेतृत्वमा १३ सय मधेसी जनताको बलिदान भएको छ । कतिपय उहाँहरुले भन्नुहुन्छ ५० जना मरे, १०० जना मरे, १३ सयको हिसाव कसले गर्ने ? त्यसैले मेरो त राजनीतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, भावनात्मक सम्वन्ध छ मधेससँग ।
त्यसैले यो मुद्दाको बाहक र ठूलो बलिदानको जिम्मेवारी मेरो काँधमा भएकाले अधिकार स्थापित गर्न लडिरहेको छु । यो थाहा पाउँदापाउँदै र मैले अपिल गर्दा गर्दै पनि उहाँहरु चुनावमा आउनुभएन भने मैले यही भन्नुपर्ने हुन्छ, मोर्चाका नेताहरुले इतिहासमा निकै ठूलो गल्ती गर्नुभो । म अहिले नै आरोप लगाउन चाहन्न । किनकि आजका दिनसम्म पनि कुराकानी भइरहेको छ र मैले देखेसम्म सकारात्मक ढंगले सम्झौता खोजिराख्नु पनि भएको छ ।
केही केही नेताहरु त बढो चिन्ताका साथ कस्तो गर्न पुगियो, कसरी मिलाउने हो भनेर कुरा गरिराख्नुभएको छ । त्यसैले म उहाँहरुलाई आरोपित गर्ने पक्षमा छैन ।
हाम्रो पार्टीको बैठकले सम्वाद सहमतिको बाटोबाट उहाँहरुलाई चुनावमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो सबै अर्थमा म आशावादी छु ।
तपाई प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा बढी छलफल र मेहनत गरेको विषय संविधान संशोधन, मधेसलाई सम्बोधन नै थियो होला । अहिले पनि गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो के रहेछ, जति गर्दा पनि सहमति नहुने ? केही मानिसहरुले भनेको जस्तो जे गरे पनि मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआउने नै हो कि ?
यो प्रश्नको उत्तर म निर्वाचनपछि मात्रै दिन्छु । अहिले भन्न सक्दिनँ ।
प्रतिपक्षले समेत भनिरहेको छ कि सरकार चुनाव गर्न चाहँदैन, माओवादीलाई हार्ने डर छ, त्यसैले प्रचण्ड चुनाव चाहँदैनन् । यसमा सत्यता छ कि छैन ?
मैले निर्वाचन घोषणा गर्ने बेलामा नै प्रष्टसँग भनेको छु कि संविधान कार्यान्वयन र परिवर्तन संस्थागत गर्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यसैले मेरो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन सम्पन्न गराउनेमा छ । किनकि, यो देशको निम्ति आवश्यक छ । मेरो पार्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने मेरो सरोकार छैन । देशले जित्नुपर्‍यो, जनताले जित्नुपर्‍यो, परिर्वतनका मुद्दाले जित्नुपर्‍यो ।
चुनावमा कांग्रेस आओस्, राप्रपा आओस् वा अरु कोही आउँदैमा यो रोकिँदैन । चुनावमा हारजित त भइराख्छ । अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, संविधान कार्यान्वयन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने प्रक्रियाले गति लियो भने मेरा लागि सबैभन्दा सन्तुष्टि त्यही हुन्छ । चुनावको परिणाम मेरा लागि सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको विषय हुँदैन ।
जहाँसम्म प्रतिपक्षले लगाउने आरोप हो, त्यसमा कुनै तथ्य र आधार छैन । म अहिले तीतो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्नँ । तर, म प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँहरुले यतिधेरै आरोप प्रत्यारोप, गालीगलौज गर्नु भो । ८ महिना पुगेर ९ महिनामा जाँदैछ, मैले जे जति काम देश र जनताको पक्षमा गरेँ र अहिले निर्वाचन गर्नका निम्ति जुन गम्भीरता, दृढता र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहेको छु, यो नेपाली जनताले देखेका छन् ।
अहिले पनि उहाँहरुले त्यसोभन्दा कस्तो लाग्छ भने प्रतिपक्ष आतंकित भइसकेको छ । झुटो आरोप लगाएर वा बदनाम गरेर सजिलै प्रचण्ड वा यो सरकारलाई सिध्याउन सकिन्छ भनेर सोच्नुभएको थियो कि ? सुरुमा, जतिबेला उहाँहरुले लम्पसारवादको सिद्धान्त आफैं प्रतिवादन गरेर प्रचार गर्नुभएको थियो, यहाँसम्म आइपुग्दा स्थिति ठीक उल्टो भयो । म अहिले सबै श्रृखंला भन्न चाहन्नँ ।
निर्वाचनका निम्ति सरकारको जुन दृढता देखिएको छ, यसबाट प्रतिपक्ष शायद आतंकित भएको हुनाले जनतालाई भ्रम दिने साह्रै तल्लो स्तरको प्रचारबाजी बाहेक केही होइन ।
निर्वाचन गर्छु भन्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतामा शंका गरेको होइन तर, वातावरणले अझै शंका गराइरहेको छ । सत्तारुढ राप्रपा आन्दोलनमा छ, माग सम्बोधन भएन भने सरकारबाट बाहिरिने मात्र होइन, चुनावमा भाग नलिनसक्छौं भनिरहेको छ । तपाईकै पूर्वसहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति ६८ दल भेला गरेर आन्दोलनमै छ । अर्का पूर्वसहकर्मी विप्लवको पार्टी स्थानीय चुनाव चुनाब विथोल्छु भन्दै हिँँडेको छ, यसबाट सरकार घेराबन्दीमा पर्दैन ?
यो सबै नकारात्मक परिस्थिति, जुन तपाईले भन्नुभयो, एकातिर र जनता निर्वाचन चाहन्छन् अर्कोतिर राख्नुभयो भने जनताको पल्ला धेरै बलियो छ भन्ने मेरो विश्वास छ । जनता निर्वाचन चाहन्छन्, मधेसमा पनि पहाडमा पनि ।
जनताले के कुरा बुझिसकेका छन् भने अहिलेको निर्वाचन भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने, आफ्नो गाउँघरमा धेरै अधिकार आउने निर्वाचन हो । त्यसैले अरु टिप्पणीले खास प्रभाव पार्न सक्दैन, जनता नै निर्णायक हुन् भन्न चाहन्छु ।
अर्को, मैले अघि भनेँ कि निर्वाचन आयोग तयार छ, सुरक्षा अंगहरु तयार छन्, जनता तयार छ, नेतृत्व तयार छ । सरकार र प्रधानमन्त्री पूराका पूरा तयार छ भनेपछि साइड साइडमा देखिने कुराहरुले चुनावलाई असर गर्न सक्ने मलाई लाग्दैन ।
दोस्रो, तपाईले सत्तारुढ दलमै पनि फरक मतजस्तो देखियो, ६८ पार्टी भन्नुभो । एकपटक ९२ दल आएका थिए, त्यसको मैले केही हिसाब देख्दिँन । तर, नयाँ शक्ति र बाबुरामजीका सन्दर्भमा मैले केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ-
उहाँले आजभोलि जे भन्ने गर्नुभएको छ, बाबुरामजी अलि बिछिप्त हुनुभयो कि जस्तो लाग्छ, बडो माया पनि लाग्छ । चुनाव-चिन्हका लागि मैले निर्वाचन आयोगदेखि पार्टीहरुसँग लगातार छलफल गरेको छु र अझै पनि पार्टीलाई चुनाव चिन्ह त दिनु पर्ने हो भन्नेमा छु ।
अझै ठाउँ छ कि भनेर पार्टीहरुको बैठक बोलाएको छु, चुनाव चिन्हबारे छलफल गर्न । तर, उहाँ प्रचण्डले नै दिन नचाहेको जस्तो प्रचार गर्नुभएको छ । एनसेलको जसरी पनि कर उठाउने भनेर मैले भनिरहेको छु र अर्को कुनै निर्णय पनि भएको छैन । उहाँले बडो विचित्रको प्रचारबाजी गरिराख्नुभएको छ । यसबाट बाबुरामजी बिचरा, बिछिप्त पो हुनु भयो कि भनेर चिन्ता र माया लाग्न थालेको छ । त्यसैले उहाँ भनेको कुराले खासै असर हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मोर्चासँग अहिले पनि सम्वादमै छु, उहाँहरु आउनुपर्छ ।
फेरि पनि अन्तिममा के हो भने जनता नै निर्णायक हो । राज्यका सबै संयन्त्र तम्तयार भएर अघि बढेपछि र जनता तयार भएपछि चुनाव केहीले पनि रोकिँदैन ।
नागरिक अधिकार स्थापीत गर्न पत्रकारहरु अग्रसर बन्नु पर्छ : पत्रकार महासंघ अध्यक्ष आचार्य